Sanatoriums de Montenegro
Tsy vitan'ny hoe miala sasatra sy mitsangatsangana any an- tendrombohitra ny olona mankany Montenegro. Eto, voahodidin'ny natiora malaza dia malaza manerana an'i Eoropa manontolo, ny famotopotorana ao Montenegro . Tonga eto ho fitsaboana sy fanarenana izy ireo ary mifankatia amin'ireo trano fanatobiana rehetra.
Ny toeram-pitsaboana any Montenegro, izay toerana handehanan'ny olona, ​​dia eo amoron-dranomasina, ary amin'ny endrika ivelany dia tsy misy fahasamihafana amin'ny trano. Aorian'ny fandao ny fomba fitsaboana, dia afaka mandeha na mitsaingam-pandeha ny marary, raha tsy voararan'ny dokotera izany. Aza mieritreritra fa hopitaly ny hopitaly. Eto no misy ny teknôlôjia farany indrindra, ary ny trano fialan-tsasatra dia tsy voatery miavaka amin'ny trano fatoriana lafo.
Igalo - toeram-ponenana malaza indrindra ao Montenegro
Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia miditra amin'ny iray amin'ireo mpitsabo roa, izay manana endrika hafa ary manatona fitsaboana. Izy roa dia miorina eo akaikin'i Tivat ao amin'ny Bay of Boka malaza Boka.
Noho izany, ny toeram-pitsaboana Igalo any Montenegro no malaza indrindra eto, fa eto ivelan'ny firenena ihany koa. Eto izy ireo dia mifandray amin'ny fitsaboana mivantana sy ny fanarenana aorian'ny aretina nafindra. Ny anaran'ny fikambanana dia ny Institute of Medicine, ny Rheumatology ary ny fanarenana ny Dr. Simo Milosevic. Ny olona isaky ny vanim-potoana dia azo raisina eto - avy amin'ny ankizy ka hatramin'ny zokiolona. Eto izy ireo dia tafiditra amin'ny fanarenana taorian'ny:
ny fandidiana ny rafitry ny musculoskeletal amin'ny fampiasana fampiofanana ao amin'ny toeram-pitsangatsanganana, fitarafana sy balneotherapy;
aretina amin'ny rafi-panafody (fanesorana, asthm) amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, fikarakarana, fitsaboana, drainage, kinesitherapy;
aretin'ny neurolojia (fifofana, trauma tampoka, sclérose plus). Ampiasao ny kinesitherapy, ny fitsaboana miteny, ny asa sy ny fitsaboana ara-tsaina;
Olana amin'ny rafitra saro-pady (korontana, fitsaboana amin'ny valizy). Ny hydro-, kinesi-sy electrotherapyapy, ny lymphatique drainage, ny fampiasana masages;
Ny aretim-pivalanana amin'ny riaka ao amin'ny dobo, ny laser, ny fitsaboana labasy, ny elektrôteraapy, ny magnets, ny karazana masajara.
Ny fanarenana ny zaza dia ahitana ny ady amin'ny:
rheumatisme in remission;
fitomboana sy famaritana ny hazavana;
fampiatoana amin'ny fampandrosoana;
fahavoazana amin'ny fahaterahana;
Ny lefona amin'ny rafi-pitabatabana.
Ao amin'ny hopitaly Igalo, dia vita ny fandidiana mba handresena ireo olana miteraka lanjany (karazana fiterahana), diabeta, ary miatrika ny fisorohana ny osteoporose sy ny fepetra henjana. Io toeram-pitsaboana io no fitsaboana gout malaza indrindra any Montenegro.
Eto ianao dia afaka mandamina ny trano fonenana toy ny bisy feno, bisy ary ny alina / sakafo maraina. Ny ankizy hatramin'ny 2 taona dia afaka mividy maimaim-poana, ary hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 12 taona - mandoa 50% amin'ny vidin'ny fitakiana olon-dehibe.
Toeram-pitsaboana ara-pahasalamana Vrmac
Ny famonoana an'i Montenegro amin'ny fitsaboana any an-dranomasina dia nalaza foana. Raha ny marina dia nandeha tany amin'ny "rano" ny fianakavian'ny mpanjaka. Tsy dia kely loatra ny toeram-pitsaboana Vrmac, any amin'ny tanànan'i Prcanj, 7 kilometatra monja miala an'i Kotor , any amin'ny faritra mahafinaritra indrindra amin'ny Bay. Anisan'ny Ivotoeran'ny fanarenana an'i Belgrade izy. Ity toeram-pitsaboana marobe ity dia mpitsabo sy mpizahatany. Ny vondron'ireo mpitsabo matihanina dia miatrika olana amin'ny fofona miaina, ny rafi-pitiliana, ny aretim-pivalanana. Ny fandaniana amin'ny fitsaboana sy ny trano fandraisam-bahiny eto dia manomboka 25 euro isaky ny olona.
Ny toeram-pitsaboana dia manana làlana manokana 1 kilometatra eo ho eo. Ny fepetra takatry ny toetrandro dia mandray anjara tanteraka amin'ny fanarenana ny marary amin'ny sokajin-taona rehetra. Ny fandaminana dia mampihatra melodie toy ny taratra infrarota sy ultraviolet, laser sy magnetotherapy, thermel sy hydrotherapy, fitsaboana alika.
Mponina ao amin'ny hotely-sanatorium amin'ny toerana 210 no atolotra:
Deluxe efitrano na bungalows ho an'ny olona 3-4;
fikarakarana fitsaboana vonjimaika;
kianja fanaovana tennis, toeram-pisakafoanana sy dobo filomanosana, efitrano fialana ary lakolosy basketball;
trano fisakafoanana roa miaraka amin'ny sakafo tsy tapaka sy ny sakafo;
cafe misy disko eo amoron-dranomasina.
Legoland any Danemark
Fahaizana amoron-drakitra any amin'ny Repoblika Tseky
Fialan-tsasatra any Montenegro
Toerana fitehirizam-bokatra any Norvezy
Belzika any Belgique any an-dranomasina
Fialantsasatra any Letonia
Nina Dobrev sy ny sipany 2015
Ahoana ny fisafidianana ny endriky ny jeans?
Badan - fitrandrahana sy fitsaboana eny an-kalamanjana
Banquet ho an'ny lalantsara
Geranium - fampiharana
Ny fangirifiriana amin'ny tendany rehefa manodina ny loha - ny antony rehetra sy ny fomba hanafoanana azy ireo
Asidra amine amin'ny vokatra
Inona no hanomezana sakafo ny tokantrano ao an-trano?
Vovobony matevina amin'ny taratasy
Sakafo mamy sy main'ny akoho - recipe